လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စားကြူးခြင်း - ဦး နှောက်သည်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူများကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်သနည်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စားကွူးခွငျး: အဦးနှောက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ (2011) ထိန်းချုပ်မည်ကိုဘယ်လို
Physiol ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2012 ဇူလိုင် 25 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Physiol ပြုမူနေ။ 2011 ဇူလိုင် 25; 104 (1): 173-177 ။
2011 မေလ5အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2011.04.057
Elaine အမ် Hull*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Physiol ပြုမူနေ
Bart Hoebel သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှစ်ဦးစလုံး mediates တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံအာရုံကြောကွန်ယက်၏တစ်ဦးအမြင်အတုသိရသည်။ သူ microdialysis ၏အသုံးပြုမှုကိုရှေ့ဆောင်များနှင့်လည်းထိထိရောက်ရောက်လျှပ်စစ်ဆွ, တွေ့ရှိရပါသည်, microinjections နှင့် immunohistochemistry ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူနို့တိုက်ကျွေးရေး, လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး, နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (LH) ၏လျှပ်စစ်ဆွအားလုံးတိုးမြှင့် dopamine နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (DA) ဖြန့်ချိ (NAc) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc အတွက် DA လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်သော်လည်းသို့သော်သည်, LH အတွက် DA လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ inhibited ။ အဆိုပါ Hull ကဓာတ်ခွဲခန်းသူတို့အားစိတ်ကူးများအချို့ကိုလိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ perifornicalLH အတွက် serotonin (5-HT) မဟုတ်ရင်အဆိုပါ mesocorticolimbic DA ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိအာရုံခံ excite လို, (နွားကို / HCRT) orexin / hypocretin အာရုံခံဟန့်တားသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) တွင် DA လွှတ်ပေးရန်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင်းပြသကြနှင့် testosterone ဟော်မုန်း, အချိုမှု, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) နှင့်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ MPOA DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်မိတ်လိုက်မြှင့်တင်ရန်။ အနာဂတ်သုတေသနဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitters အကြားအာရုံကြောစနစ်များနှင့် interaction ကအပေါ် Bart Hoebel ရဲ့အလေးပေးအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
keywords: Dopamine, serotonin, Medial preoptic ဧရိယာ, Mesocorticolimbic ကျေးရွာအုပ်စု, testosterone, Nitric oxide ကို, Orexin / hypocretin, အချိုမှု, သုတ်ရည်ထိ
1 ။ Bart Hoebel ရဲ့သုတေသန
Bart Hoebel အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တို့တှငျဧရာမပါပဲ။ သူဟာနည်းစနစ်အသစ်တွေရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏အလုပ်လုပ်သို့ဟောပြောမှုတွေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် neurotransmitters စုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ microdialysis နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography (HPLC) ၏ကိုယျတျော၏အသုံးပြုမှု hypothalamus နှင့် mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်အကြားအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောသဘောတရားဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အများကြီးကိုသူစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသောလမ်းခရီးတလျှောက်လာခဲ့သည်။
ထုတ်ဝေသူ၏အအစောဆုံးဆောင်းပါး, သိပ္ပံ, အစားအစာစားသုံးမှု inhibited ကြောင်းအစီရင်ခံ, နို့တိုက်ကျွေးမှု, ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic Self-stimulation မသာ, နှင့် ventromedial hypothalamus [နှစ်ဦးစလုံးသက်ရောက်မှုကမကထပြုခဲ့ကြောင်း1] ။ တစ်စက္ကန့် သိပ္ပံ ဆောင်းပါးသုတ်ရည်ထိထည့်သွင်းရန်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေသူ့ရဲ့လေ့လာမှုတိုးချဲ့။ ဒါဟာသူတို့ [posterior hypothalamus ၏လျှပ်စစ်ဆွဆုလာဘ်သုတ်ရည်ထိရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်း-သွေးဆောင်အဖော်ရှာကြောင်းအစီရင်ခံ2] ။ သို့တိုင်သုတ်ရည်ထိလေ့လာနေသူက၎င်း၏စည်းမျဉ်းထဲမှာ serotonin (5-HT) ၏အခန်းကဏ္ဍစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။ p-chloroamphetamine (PCA) ၏ acute ဆေးထိုး 5-HT လွှတ်ပေးရန်၏ရလဒ်အဖြစ်အမျိုးသမီးကြွက် lordosis inhibited ။ သို့သော်နာတာရှည် PCA [5-HT ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ရလဒ်အဖြစ်, lordosis facilitated3] ။ ထို့ကြောင့်, 5-HT အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Bart Hoebel အကြာတွင် microdialysis နှင့် dopamine (DA), serotonin (5-HT) နဲ့တတ်ကျွမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် acetylcholine (ACH) သည်ရှေ့တန်းမှသို့ရောက်ကြ၏။ အစားအသောက်စားသုံးမှု, ကိုကင်းများနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic Self-stimulation အားလုံး [သည့် mesocorticolimbic DA ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ DA တိုးလာ4, 5, 6] ။ ထို့ပြင်ဦးနှောက်ဧရိယာများအကြားမျှော်လင့်မထားတဲ့ interaction ကရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ, NAc vs. ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (LH) တွင် DA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်စပ်လျဉ်းရှိခဲ့  ။ အဆိုပါ LH အတွက် DA မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ inhibited ပေမယ် NAc အတွက် DA ကြိုးကြီးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုရာထူးတိုး။
2 ။ Hull ကဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသန
အကြှနျုပျ၏ဓာတ်ခွဲခန်းကဤအတွေးအခေါ်များအချို့ပေါ်တက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြန်ဖြေဟာ circuitry စုံစမ်းအတူတကွအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူ microdialysis, microinjection နှင့် immunohistochemistry အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
2.1 ။ အဆိုပါ anterior LH အတွက် 5-HT ဆိုးကျိုးများ
ကြှနျတေျာ့ကိုယခင်ကျောင်းသားဒန် Lorraine [5-HT သုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန်မှာ anterior LH အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ microdialysis ကိုအသုံးပြု8] (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 1), ပဲ Bart Hoebel နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်အတူရှိ 5-HT လွှတ်ပေးရန်အစီရင်ခံခဲ့သကဲ့သို့  ။ ထို့ပြင် LH သို့ရွေးချယ် 5-HT reuptake inhibitor ၏ microinjection (SSRI) လက္ခဏာ Post-ejaculatory quiescence နှင့် SSRI ရဲ့စိတ်ကျရောဂါကုသရာတွင်လည်းအသုံးပြု၏ inhibitory လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလားတူဆင်တူသုတ်ရည်ထိ, inhibited ။ ထို့ကြောင့် Hoebel ဓာတ်ခွဲခန်း [5-HT အတွက်စနစ်တကျတိုးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအာရုံချို့ယွင်းကြောင်းပြသ10] နှင့်ဒေသခံ 5-HT တိုးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ inhibited ရှိရာအနည်းဆုံးတဦးတည်းကဦးနှောက်ဧရိယာသည် anterior LH, တည်ရှိသော Hull ကဓာတ်ခွဲခန်း  ။ နောက်ပိုင်းဆောင်းပါးတှငျကြှနျုပျတို့သော anterior သို့ 5-HT ၏-Dialysis reverse ဖော်ပြခဲ့သည် (perifornical) LH [သည့် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား11] ။ ထို့ကြောင့်, သုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန်မှာ LH အတွက် 5-HT လွှတ်ပေးရေးမှာအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌, mesocorticolimbic DA လမ်းကြောင်းဟန့်တားသဖြင့်, Post-ejaculatory quiescence အထောက်အကူပြုပေမည်။
extracellular serotonin အတွက်ယာယီအပြောင်းအလဲများကို (5-HT) သုတ်ရည်ထိမီနှင့်စဉ်အတွင်းအထီးကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှကောက်ယူ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေတာအချက်ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်အခြေခံ (ခ) စဉ်အတွင်းစုဆောင်း 6-မိ dialysate နမူနာများအတွက် (± SEM) ကိုဆိုလိုဖြစ်ပါသည် ...
2.2 ။ အဆိုပါ anterior အတွက်နွားကို / HCRT (perifornical) hypothalamus
ကျနော်တို့ကပိုမကြာသေးမီကနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic 5-HT ပုံပြင်တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ LH အတွက်အာရုံခံတဲ့အုပ်စုတစု (မှာလည်း hypocretin, HCRT အဖြစ်လူသိများနွား,) ကို peptide orexin ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပွငျ 5-HT ယခင်က (သူတို့အားအာရုံခံတားစီးအစီရင်ခံခဲ့သည်12) ။ နွားသည် / HCRT အဓိကအား [နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူသည်၎င်း၏ဆွဘို့အလူသိများသည်13,14] နှင့်အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာ၏ထိန်းချုပ်မှု [15, 16] ။ နွားသည် / HCRT ပါဝင်သောအာရုံခံယခင်က [သည့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကိုပရောဂျက်မှအစီရင်ခံခဲ့17], အ mesocorticolimibc DA ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ရင်းမြစ်။ ထို့အပွငျ, နွား / HCRT ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်  ။ ကြှနျတေျာ့ကိုယခင်ကျောင်းသားယောဟနျသ Muschamp Post-ejaculatory 5-HT အားဖြင့် inhibited သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic အာရုံခံရှိသူများ, နွား / HCRT ပါဝင်သောဆဲလ်တွေဖြစ်အံ့သောငှါတွေးဆ။ ကျနော်တို့ [မိတ်လိုက်, နွား / HCRT ပါဝင်သောဆဲလ်တွေအတွက်က c-Fos-immunoreactivity တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ19] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်းအများစု estradiol ၏စနစ်တကျထိုးခွငျးအားဖွငျ့ပွနျလညျထူထောငျခဲ့ပြီးသောနွားကို / HCRT-immunoreactive အာရုံခံ၏အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းသည်။ နွား / HCRT ရန်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲသုတ်ရည်ထိချို့ယွင်းအဖြစ်, နွား / HCRT, အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်  ။ ထို့အပြင် VTA သို့နွားကို / HCRT ၏ microinjection dopaminergic ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အပေါ်ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးထိုးပုံ DA agonist apomorphine နှင့်အတူ DA autoreceptors လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့သော VTA dopaminergic အာရုံခံ၏ depolarization ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ရလဒ်ပေမယ့်နှစ်ဦးအနိမ့်ဆေးများ, ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်လူဦးရေတုံ့ပြန်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုံးဆ-တံဆိပ် immunohistochemistry မိတ်လိုက်, နွား / HCRT အမျှင်ဖို့ apposed သော VTA အတွက် dopaminergic အာရုံခံအတွက်က c-Fosimmunoreactivity တိုးပွားလာကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, နွားကို / HCRT အာရုံခံအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အခြားသဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်, အ mesocorticolimbic DA လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ဖို့ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံရတယ်။
2.3 ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) တွင် DA လွှတ်ပေးရန်
အဆိုပါ LH နဲ့ mesocorticolimbic DA သည့်စနစ်အပြင်, ငါ့ဓာတ်ခွဲခန်းအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုထဲမှာ, hypothalamus ၏ anterior အဆုံးမှာ, ထို MPOA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ MPOA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာခဲ့ကြပြီသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါမျိုးစိတ် ([အတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှောင့်အယှက်20]) ။ အဆိုပါ MPOA ၏လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ဓာတုဆွသုတ်ရည်ထိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဟောင်း copula လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှု။ DA အာရုံခံအခြားဆိုက်များမှလုပ်ပေးအဖြစ် DA အာရုံခံခြင်း, MPOA innervate ဒေသခံ A14 periventricular .
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် MPOA အတွက် extracellular DA အဆင့်ဆင့်အကြားနီးကပ်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ DA တစ်ခု estrous အမျိုးသမီးနှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းတုံ့ပြန်အထီးကြွက်များ၏ MPOA အတွက်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်  (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 2) ။ testosterone ဟော်မုန်း၏မကြာသေးမီရှိနေခြင်း DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်သုတ်ရည်ထိနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ နဂိုအတိုင်းအထီး, testosterone ဟော်မုန်း-ကုသသင်းနှင့်အဖော်ရှာစဉ်အတွင်းထိန်းသိမ်းထားသို့မဟုတ်နောက်ထပ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည့်တစ်ဦး Pre-copulatory DA တိုးပြသခဲ့သည် copulated ကြောင့်ရေနံကုသသင်း [22, 23] ။ copulate မရေနံ-ကုသသင်းစီးပွါးမပြခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ DA တုံ့ပြန်မှုကိုအမူအကျင့်များနှင့်ခန္ဓာဗေဒတိကျတဲ့နှစ်ဦးစလုံးရှိခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ DA မိတ်လိုက်မတိုင်မီတိုးပွားလာဆိုတဲ့အချက်ကိုအပွားသုတ်ရည်ထိကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မခံခဲ့ရပေမယ့်ဖြစ်နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့အကြံပြုစတင်ခဲ့သည်။ Two-, five- နှင့်သင်း၏ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုဆယ်ရက်ကြာ regimen DA လွှတ်ရာကိုပွနျလညျထူထောနှင့်အတူနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတိုးပွားလာ copulatory နိုင်စွမ်းအတွက်ရလဒ်  ။ နှစ်ရက် testosterone ကုသမှုမိတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် DA တုံ့ပြန်မှု restore ခဲ့ပါဘူး။ ငါးရက်ကြာ testosterone ဟော်မုန်း-ကုသသင်းအများစုဟာ copulate နိုင်ခဲ့ကြတယ်နှင့် ejaculate နိုင်သူတို့ထဲကတစ်ဝက်နှင့်အတူတစ် DA တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulated 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူဆကျဆံသင်းအားလုံးအပေါင်းတို့နှင့်အတူ DA တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ copulatory အစီအမံများနှင့် DA အဆင့်ဆင့်အကြားမြောက်မြားစွာဆက်စပ်မှုကိုထပ်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, testosterone ဟော်မုန်းများကသင်းနှင့်၎င်း၏ပွနျလညျထူထောငျအောက်ပါသုတ်ရည်ထိဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကိုအနီးကပ်အနေနဲ့ estrous အမျိုးသမီးဖို့ MPOA DA တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု testosterone-mediated တိုးမြှင့်သည့် MPOA အတွက်တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Gonadally နဂိုအတိုင်းအထီးကြွက်တစ်ဦးတပိုင်တနိုင် estrous အမျိုးသမီးမှ precopulatory ထိတွေ့မှုကာလအတွင်း extracellular DA တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ...
testosterone ရဲ့ metabolites ရေရှည်သင်းအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ပြန်လည်အတွက် differential ထိရောက်သောခဲ့ကြသည်  ။ Estradiol အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်အတွက်တိုး DA ၏ပုံမှန် Basal အဆင့်ဆင့်ပွနျလညျထူထောငျ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Estradiol-ကုသသင်း intromitted, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတစ်ဦး ejaculatory အပြုအမူပုံစံပြသခဲ့သည်။ dihydrotestosterone မဟုတ်သလိုရေနံမော်တော်ယာဉ်ကိုမသုတ်ရည်ထိသို့မဟုတ် Basal သို့မဟုတ်အမျိုးသမီး-နှိုးဆွ DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ dihydrotestosterone estradiol နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါသို့သော်, ပေါင်းစပ် [သုတ်ရည်ထိနှင့် Basal နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို-နှိုးဆွ DA လွှတ်ပေးရန်နှစ်ဦးစလုံးပွနျလညျထူထောငျ25].
MPOA DA ၏ extracellular အဆင့်ဆင့် gonadally နဂိုအတိုင်းအထီးထက်သင်းအတွက်အနိမ့်သော်လည်း intracellular အဆင့်ဆင့် [နဂိုအတိုင်းအထီးထက်အမှန်တကယ်မြင့်26] ။ အမှန်စင်စစ်တစ်ရှူး (သိမ်းဆည်းထား) DA အဆင့်ဆင့်နှင့် copulate နိုင်စွမ်းအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု [ရှိခဲ့27] ။ non-copulating တိရိစ္ဆာန်များ (dihydrotestosterone- နှင့်ရေနံ-ကုသသင်း) သုတ်ရည်ထိလုပ်ခဲ့တယ်သောအုပ်စုများ (estradiol-, estradiol + dihydrotestosterone- နှင့် testosterone ဟော်မုန်း-ကုသသင်း) ကိုပြု၏ထက်တစ်သျှူး DA ၏အဆင့်မြင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် MPOA အတွက် DA ၏ပေါင်းစပ်နှင့်သိုလှောင်မှုနဂိုအတိုင်းယောက်ျား၌ရှိသကဲ့သို့သင်းအနည်းဆုံးအဖြစ်ကြီးလှပေ၏ သင်းအတွက်ချို့တဲ့ DA synthesize နှင့်စတိုးဆိုင်မှမိမိတို့၏စွမ်းရည်ရှိပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပေါများစတိုးဆိုင်များလွှတ်ပေးရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
2.4 ။ MPOA DA လွှတ်ပေးရန်အတွက် NO ၏အခန်းကဏ္ဍကို
အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန် NO [ခြင်းဖြင့် facilitated ခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်28, 29] ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ NO အဆိုပါ MPOA အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် [NO, L-မိုင်နိုအက်စစ်၏ရှေ့ပြေး, Basal MPOA DA လွှတ်ပေးရန်တိုးတက်သဖြင့်, NO synthase (NOS) ကိုရန် L-NMMA လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား30] ။ တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့ NOS inhibitor, L-, NAME ဘယျလိုမှမသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်  cGMP ကကမကထပြုခဲ့ခံခဲ့ရသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု  ။ ထို့အပွငျအာရုံခံ NOS (nNOS) immunoreactivity [သင်းပြီးနောက်လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီး testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပကတိဖြစ်လေ၏33] ။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်း testosterone ဟော်မုန်းသုတ်ရည်ထိနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောဆိုလိုတယ်နဂိုအတိုင်းယောက်ျားနှင့် testosterone ဟော်မုန်း-ကုသသင်းအတွက်ထားတဲ့အလှည့်တိုးအတွက် Basal နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို-နှိုးဆွနှစ်ဦးစလုံး DA လွှတ်ပေးရေး, အ MPOA အတွက် nNOS တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
2.5 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားယောက်ျား [အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် (intromit, သူတို့က mount ဖို့တိုတောင်း latency ရှိတယ် "။ ထိရောက်မှု" သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူ copulate နှင့် ejaculate နှင့်နည်းပါးလာတောင်ပေါ်နှင့် intromissions နှင့်အတူ ejaculate နိုင်ကြသည်20]) ။ ရုံတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးမှအကြိမ်ကြိမ်အထီးကြွက်ဖော်ထုတ်သည်သူ၏ copulatory စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းအဆိုပါ MPOA အတွက်က c-Fos immunoreactivity တိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်  ။ NO အတွေ့အကြုံဆယ်လူလာသက်ရောက်မှုအချို့ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ MPOA သို့ microinjected အဆိုပါ NOS inhibitor L-NAME ၏, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်သုတ်ရည်ထိတားဆီးခြင်းနှင့်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက် intromissions နှင့်သုက်၏နံပါတ်များကိုလျော့နည်းသွား  ။ တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးခုနစ်ထိတွေ့မှု၏အသီးအသီးရှေ့တော်၌ထို MPOA သို့အုပ်ချုပ်သောအခါ, သူတို့အားထိတွေ့မှု၏စည်းရုံးရေးမှူးများသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့။ ထို့ပြင် MPOA အတွက် nNOS immunoreactivity [ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်တိုးပွါး36] ။ ထို့ကြောင့်, NO အဆိုပါ MPOA အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲတိုးအတွက်တိုး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအချို့ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။
2.6 ။ အဆိုပါ medial amygdala ကနေ MPOA မှ input
အမျိုးသမီးဖို့ MPOA DA တုံ့ပြန်မှုကိုအဓိကစီးပွားရေးနှိုးဆွသည့် medial amygdala (MEA) ဆီက input ဖြစ်ပါတယ်။ Juan Dominguez [အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိဖျက်သိမ်းသော amygdala ၏ကြီးမားသော excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လုပ်37] ။ သူတို့အားယောက်ျားအတွက် MPOA လုံးဝပွနျလညျထူထောငျသုတ်ရည်ထိသို့ DA agonist apomorphine ၏သို့သော် microinjections ။ အဆိုပါ MEA ၏သေးငယ် radiofreqency ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ချို့ယွင်းပေမယ့်သုတ်ရည်ထိဖျက်သိမ်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ [Basal MPOA DA အဆင့်ဆင့်မထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့်အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်အတွက် DA တိုးပိတ်ဆို့ခဲ့သည်37] (ကြည့်ရှု သင်္ဘောသဖန်း 3) ။ ထို့ကြောင့်, [သင်းအတွက်သုတ်ရည်ထိ estradiol ပွနျလညျထူထောငျနှင့်ဝသကဲ့သို့25] Basal MPOA DA အဆင့်ဆင့်မတတ်နိုင်သောမိတ်လိုက်ဘို့အလုံလောက်ခဲ့ကြပေမယ့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအမျိုးသမီး-နှိုးဆွတိုးအကောင်းဆုံးသုတ်ရည်ထိလိုအပ်ခဲ့သည်။ ထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များသည် MEA ၏ဓာတုဆွခုနှစ်, အချိုမှုပေါင်းတစ်အချိုမှု reuptake inhibitor သုံးပြီး [သုတ်ရည်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုန်းမှာ, အ MPOA အတွက် extracellular DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်38] (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 4) ။ ထို့ကြောင့် MEA သုတ်ရည်ထိအားပေးအားမြှောက်သောတလမ်းတည်းဖြင့်အဆိုပါ MPOA အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ medial amygdala ၏တွေ့ရှိရပါသည်တစ်ခု estrous အမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိကနေရရှိလာတဲ့အတွက် MPOA အတွက် DA များလွှတ်ပေးရန်တားစီး။ အဆင့်ဆင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းတစ်ဦး estrous အမျိုးသမီး (Pre) မှ precopulatory ထိတွေ့တုန့်ပြန်အခြေခံ (BL) မှ% သောအပြောင်းအလဲကိုယ်စားပြု ...
MEA ဆွသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် microinjection လက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ MPOA ထံမှ dialysate အတွက် DA ၏ levels ။ အဆင့်ဆင့် MEA-ဆွသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် microinjection တုံ့ပြန်အခြေခံကနေ% ပြောင်းလဲမှု (BL) ကိုကိုယ်စားပြု; သို့ microinjections ပြီးနောက်စုဆောင်းထားသောနမူနာ ...
2.7 ။ အဆိုပါ MPOA အတွက်အချိုမှု
အဆိုပါ MPOA အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တစ်ခုမှာအာမခံ [အချိုမှုဖြစ်ပါသည်39] ။ ဒါဟာသုက်လွှတ်သည့်အချိန်တွင်သုတ်ရည်ထိနှင့်အကြောင်းကို 300% အထိတိုးစဉ်အတွင်း MPOA အတွက်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်  ။ အချိုမှု reuptake inhibitors ၏ပြောင်းပြန် Dialysis မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, extracellular အချိုမှုတိုးလာနှင့်လည်းသုတ်ရည်ထိ facilitated ။ သို့သျောလညျး [သုတ်ရည်ထိနဲ့သုတ်ရည်လွှတ်-သွေးဆောင်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်နှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း MPOA သို့ serotonin (5-HT) ၏-Dialysis reverse41] ။ ထို့ကြောင့်, 5-HT မိတ်လိုက်တားစီးစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တစ်စက္ကန့် site ကိုကအချိုမှုလွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာ MPOA ဖြစ်ပါသည်။
DA အပေါ်အချိုမှုန့်သင်တန်းနည်းပြအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်မပါဝငျသညျ။ အဆိုပါ nNOS inhibitor L-NAME က MPOA သို့ reverse-dialyzed သောအခါ, အခြေခံ DA လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အချိုမှု-evoked DA လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့။ အဆိုပါလှုပ်ရှား isomer D-NAME ၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အချိုမှုအလှည့်အတွက် nNOS မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသော calmodulin မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောကယ်လစီယမ်ရောက်လာ, မြှင့်တင်ရန် NMDA receptors မှချည်နှောင်။ [ယင်း၏သက်ရောက်မှုရှည်ရှည်အိမ်နီးချင်းဆိပ်ကမ်းအတွက် DA လွှာမှတားစီးစေခြင်းငှါ, ကိုလည်းတိုက်ရိုက် (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်, vesicular ယိုစိမ့်မြှင့်တင်စေခြင်းငှါမ42]) ။ ထို့ကြောင့်, အချိုမှု, nNOS ၎င်း၏ဆွတဆင့်လှည့်သုတ်ရည်ထိနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သော MPOA အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ MPOA အချိုမှုလည်းသုတ်ရည်လွှတ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
3 ။ အကျဉ်းချုပ်
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, Bart Hoebel အလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဦးနှောက်ဧရိယာကို "ကြီးမားသောရုပ်ပုံ" ကိုဖန်တီးခဲ့သညျ။ လျှပ်စစ်ဆွ, တွေ့ရှိရပါသည်, microinjections, microdialysis နှင့် immunohistochemistry အဖြစ်သတိထားနှင့်စနစ်တကျအပြုအမူလေ့လာရေးအသုံးပြုခြင်းသူနို့တိုက်ကျွေးရေး, မိတ်လိုက်, ကျူးကျော်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitters တစ်ခုသို့ဆက်စပ်။ အဆိုပါ Hull ကဓာတ်ခွဲခန်းဟာ LH နှင့် mesocorticolimbic DA စနစ်အကြားရှိအပြန်အလှန်အပါအဝင်ထိုစိတ်ကူးများအချို့ပေါ်တက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ perifornical LH အတွက် 5-HT မဟုတ်ရင်အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံ excite မယ်လို့အရာ, နွားကို / HCRT အာရုံခံဟန့်တားသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့က Testosterone နှင့် MPOA အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံတိုး nNOS ဖေါ်ပြခြင်း, အဓိကအားအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလေ့လာခြင်း, NO ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုး Basal နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို-နှိုးဆွ DA လွှတ်ပေးရန်နှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ပါပြီ။ ထို့အပွငျအချိုမှုကိုလည်းအထူးသဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန်မှာအဖော်ရှာစဉ်အတွင်း MPOA အတွက်ဖြန့်ချိသည်နှင့်အချိုမှု, NMDA receptors နှင့်ကယ်လစီယမ်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, NO တိုးမြှင့်နှင့်အားဖြင့် DA လွှတ်ပေးရန်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ microdialysis နှင့်အခြားနည်းစနစ်များ Bart Hoebel ရဲ့ရှေ့ဆောင်အသုံးပြုရန်, ဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitters ၏အာရုံကြောစနစ်များနှင့် interaction ကအပေါ်သူ၏အလေးပေးဖို့မသာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုအများကြီးအကြွေး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့သိပ္ပံနှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှစ်ခုလုံးအတွက်, နွေးထွေးသောထောက်ခံ, စွန့်စားချင်, Collegiate နှင့်ပျော်စရာလေထု Championing များအတွက် Bart Hoebel ဖို့အများကြီးအကြွေး။ ဒါဟာကိုသိနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်သူ့ထံမှသင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအပျြောအပါးပါပဲ။
သုတေသန EM Hull ကမှ NIH ထောက်ပံ့ငွေ MH040826 ကထောက်ခံခဲ့သည်ဤနေရာတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
1 ။ Hoebel BG, နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် Self-stimulation ၏ Teitelbaum P. Hypothalamic ထိန်းချုပ်မှု။ သိပ္ပံ။ 1962; 135: 375-377 ။ [PubMed]
2 ။ Caggiula AR, Hoebel BG ။ အဆိုပါ posterior hypothalamus ထဲမှာ "သုတ်ရည်ထိ-ဆုလာဘ် site ကို" ။ သိပ္ပံ။ 1966; 153: 1284-1285 ။ [PubMed]
3 ။ Zemlan လက်ဗွေ, Trulson ME, Howell R ကို, Hoebel BG ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဦးနှောက် monoamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကို p-chloroamphetamine ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1977; 123: 347-356 ။ [PubMed]
4 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွဟာ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988; 44: 599-606 ။ [PubMed]
5 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးသည့် prefrontal cortex အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1990; 25: 975-979 ။ [PubMed]
6 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988; 42: 1705-1712 ။ [PubMed]
7 ။ Parada MA, Puig က de Parada M က, Hoebel BG ။ ကြွက်ကနျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်ဖို့ပြုမူရှိရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် dopamine ရန် Self-ထိုးသွင်း။ Pharmacol ဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 1995; 52: 17987 ။ [PubMed]
8 ။ Lorraine DS, Matuszewich L ကို, Friedman R ကို, Hull က EM ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌ Extracellular serotonin ဟာ postejaculatory ကြားကာလအတွင်းမှာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိချို့ယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 9361-9366 ။ [PubMed]
9 ။ Schwartz DH, McClane S က, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးရေး microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် extracellular serotonin တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1989 ဖေဖော်ဝါရီ 13; 479: 349-354 ။ [PubMed]
10 ။ Zemlan လက်ဗွေ, Trulson ME, Howell R ကို, Hoebel BG ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဦးနှောက် monoamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကို p-chloroamphetamine ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1977; 123: 347-356 ။ [PubMed]
11 ။ Lorraine DS, Matuszewich L ကို, Riolo ဖက်စပ်, Hull က EM ။ lateral hypothalamic serotonin နျူကလိယ dopamine accumbens ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 7648-7652 ။ [PubMed]
12 ။ လီ Y ကို, Gap xB, Sakurai T က, ဗန်တွင်း Pol AN ။ Hypocretin / orexin ဒေသခံတစ်ဦးအချိုမှုအာရုံခံဆဲလျကနေတဆင့် hypocretin အာရုံခံ excites - ထို hypothalamic arousal system ကို orchestrating များအတွက်အလားအလာယန္တရား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 1169-1181 ။ [PubMed]
13 ။ Kotz CM ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၏ပေါင်းစည်းမှု: orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2006; 88: 294-301 ။ [PubMed]
14 ။ Thorpe AJ, Cleary JP, Levine AS, Kotz CM ။ ဗဟို orexinA ကြွက်များတွင်ချိုမြိန်လုံးလေးများများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါးအုပ်ချုပ်။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 182: 75-83 ။ [PubMed]
15 ။ Sutcliffe JG, က de Lecea အယ်လ်အဆိုပါ hypocretins: အ arousal တံခါးခုံ setting ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 339-349 ။ [PubMed]
16 ။ Saper သမဝါယမ, Scammell TE, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ၏ Lu ကဂျေ Hypothalamic စည်းမျဉ်း။ သဘာဝ။ 2005; 437: 1257-1263 ။ [PubMed]
17 ။ Fadel J ကို, Deutch AY ။ orexin-dopamine interaction က၏ခန္ဓာဗေဒအလွှာ: အ ventral tegmental ဧရိယာမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2002; 111: 379-387 ။ [PubMed]
18 ။ နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, Khotib J ကို, Miyatake M က, Sakurai T က, Yanagisawa က M, Nakamachi T က, Shioda S ကိုမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များဆူဇူကီးတီတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 398-405 ။ [PubMed]
19 ။ JW, Dominguez JM, Sato သည် SM, Shen RY, Hull က EM Muschamp ။ အမျိုးသားလိင်အပြုအမူအတွက် Hypocretin (Orexin) အတွက်တစ်ဦးကအခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2837-2845 ။ [PubMed]
20 ။ Hull က EM, Rodriguez-Manzo G. အဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ ဒုတိယအ Edition ကို။ vol ။ 1 ။ Donald Pfaff, Editor ကို-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, အမ်စတာဒမ်: Elsevier စာနယ်ဇင်း; 2009 ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; စစ။ 5-65 ။
21 ။ Miller က SM, Lonstein JS ။ ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာမှ Dopaminergic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2009; 159: 1384-1396 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Hull က EM, ဒူ J ကို, Lorraine DS, အ medial preoptic ဧရိယာ၌ Matuszewich အယ်လ် Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 7465-7471 ။ [PubMed]
23 ။ Sato က S, Hull က EM ။ အဆိုပါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-cGMP လမ်းကြောင်းအထီးကြွက်များတွင် medial preoptic ဧရိယာနှင့်သုတ်ရည်ထိအတွက် dopamine efflux ထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 2006; 139: 417-428 ။ [PubMed]
24 ။ Putnam SK ကို, ဒူ J ကို, Hull က EM ။ testosterone သုတ်ရည်ထိပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် castrated အထီးကြွက်များတွင် preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန် medial: 2-, 5- နှင့် 10 ရက်ကြာကုသ။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 39: 216-224 ။ [PubMed]
25 ။ Putnam SK ကို, Sato က S, Hull က EM ။ သင်းအတွက်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: MPOA အတွက် extracellular dopamine နှင့်အတူအသင်းမှ။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 419-426 ။ [PubMed]
26 ။ du J ကို, Lorraine DS, Hull က EM ။ သင်း extracellular လျော့ကျပေမယ့် intracellular တိုးပွါး, အထီးကြွက်၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 782: 11-17 ။ [PubMed]
27 ။ Putnam SK ကို, Sato က S, Riolo ဖက်စပ်, Hull က EM ။ castrated အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိ, medial preoptic dopamine နှင့် NOS-immunoreactivity အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း metabolites ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2005; 47: 513-522 ။ [PubMed]
28 ။ Zhu XZ, Luo အဘိဓါန် LG က။ ကြွက် striatal ချပ်ကနေ endogenous dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် nitroprusside (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Neurochem ။ 1992; 59: 932-935 ။ [PubMed]
29 ။ Hanbauer ငါ Wink: D, Osawa Y ကို, Edelman GM က, Gally ဂျေအေ။ striatal ချပ်ကနေ [3H] -dopamine ၏ NMDA-evoked လွှတ်ပေးရန်အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏အခန်းက္ပ။ NeuroReport ။ 1992; 3: 409-412 ။ [PubMed]
30 ။ Lorraine DS, Hull က EM ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဟာ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine နှင့် serotonin လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ NeuroReport ။ 1993; 5: 87-89 ။ [PubMed]
31 ။ Lorraine DS, Matuszewich L ကို, Howard RV, ဒူ J ကို, Hull က EM ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အထီးကြွက်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း medial preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်။ NeuroReport ။ 1996; 8: 31-34 ။ [PubMed]
32 ။ Sato က S, Hull က EM ။ အဆိုပါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-cGMP လမ်းကြောင်းအထီးကြွက်များတွင် medial preoptic ဧရိယာနှင့်သုတ်ရည်ထိအတွက် dopamine efflux ထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 2006; 139: 417-428 ။ [PubMed]
33 ။ du J ကို, Hull က EM ။ အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် tyrosine hydroxylase အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 836: 90-98 ။ [PubMed]
34 ။ Lumley LA က, Hull က EM ။ တစ်ဦး D1 ရန်နှင့် medial preoptic နျူကလိယထဲမှာသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် FOS ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 829: 55-68 ။ [PubMed]
35 ။ Lagoda, G, Vigdorchik တစ်ဦးက, Muschamp JW, Hull က EM ။ အဆိုပါ MPOA အတွက်တစ်ဦးကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase inhibitor အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိနဲ့လှုံ့ဆော်မှုာင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2004; 118: 1317-1323 ။ [PubMed]
36 ။ Dominguez JM, Brann JH, Gil M က, Hull က EM ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုအထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase တိုးပွားစေပါသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2006; 120: 1389-1394 ။ [PubMed]
37 ။ Dominguez J ကို, Riolo ဖက်စပ်, Xu Z ကို Hull က EM ။ သုတ်ရည်ထိနှင့် medial preoptic dopamine လွှတ်ရာ medial amygdala တို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 349-355 ။ [PubMed]
38 ။ Dominguez JM, Hull က EM ။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အ medial amygdala ၏ stimulation medial preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 917: 225-229 ။ [PubMed]
39 ။ Dominguez JM, Muschamp JW, Schmich JM, Hull က EM ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာအချိုမှု-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်: အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience ။ 2004; 125: 203-210 ။ [PubMed]
40 ။ Dominguez JM, Gil M က, Hull က EM ။ Preoptic အချိုမှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 1699-1703 ။ [PubMed]
41 ။ Dominguez JM, Hull က EM ။ serotonin ဟာ medial preoptic ဧရိယာ၌မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အချိုမှုလှုပ်ရှားမှု attenuates ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2010; 241: 554-557 ။ [PubMed]
42 ။ Prast H ကို, အာရုံခံ function ကိုတစ် modulator တွေကိုအဖြစ် Phillipu အေ Nitric oxide ကို။ prog Neurobiol ။ 2001; 64: 51-68 ။ [PubMed]